इन्टरनेट उपयोग तथ्याङ्क 2021: डाटा कहिल्यै सुत्दैन 8.0 | Martech Zone
इन्टरनेट उपयोग तथ्याङ्क 2021: डेटा कहिल्यै सुत्दैन 8.0
सोमबार, नोभेम्बर 1, 2021 सोमबार, नोभेम्बर 1, 2021 शर्ली स्टार्क
बढ्दो डिजिटलाइज्ड संसारमा, COVID-19 को उदयले बढेको, यी वर्षहरूले नयाँ युगको परिचय दिएका छन् जसमा प्रविधि र डेटाले हाम्रो दैनिक जीवनमा ठूलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। त्यहाँ कुनै पनि मार्केटर वा व्यवसायको लागि, एउटा कुरा निश्चित छ: हाम्रो आधुनिक डिजिटल वातावरणमा डाटा खपतको प्रभाव निस्सन्देह बढेको छ किनकि हामी हाम्रो वर्तमान महामारीको मोटोमा छौं। क्वारेन्टाइन र अफिस, बैंक, स्टोर, रेस्टुरेन्ट, र थपको व्यापक तालाबन्दीको बीचमा, समाजले ठूलो मात्रामा आफ्नो उपस्थिति अनलाइन सार्यो। जब हामी यो नयाँ युगमा अनुकूलन गर्न सिक्छौं, डेटा कहिल्यै सुत्दैन।
यद्यपि, प्रि-कोविड समयमा फिर्ता मापन गर्दै, सिर्जना गरिएको र साझा गरिएको डाटाको मात्रा पहिले नै विस्तार भइरहेको थियो, यद्यपि बिस्तारै। यसले निश्चित रूपमा देखाउँछ कि इन्टरनेट प्रवृतिहरू निकट भविष्यको लागि रहन यहाँ छन्, र डाटा उपलब्धता बढ्दै जानेछ।
५०% कम्पनीहरूले पूर्व-महामारी समयको तुलनामा डाटा एनालिटिक्स धेरै प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसमा 50% भन्दा बढी साना व्यवसायहरू पनि समावेश छन्।
Sisense, BI र विश्लेषण रिपोर्ट को राज्य
कति टाढा डाटा विकसित भएको छ?
हाम्रो विश्वव्यापी जनसंख्याको लगभग 59% इन्टरनेट पहुँच छ, जबकि 4.57 बिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू छन् - यो अघिल्लो वर्ष अर्थात3को तुलनामा लगभग 2019% ले बढेको छ। ती संख्या मध्ये, 4.2 बिलियन सक्रिय मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् जबकि 3.81 बिलियन सोशल मिडिया प्रयोग गर्दछ।
2021 डाटा केन्द्र रिपोर्ट को स्थिति
कसरी COVID-19 ले हामीलाई टाढाको ठूलो कार्यबलमा पहुँच दिएको छ, हामी सुरक्षित रूपमा दाबी गर्न सक्छौं कि हाम्रो कामको भविष्य आइपुगेको छ, र यो घरबाट सुरु हुन्छ! - कम्तिमा समयको लागि। यस अनुमानलाई हेर्ने एउटा तरिका निम्नानुसार छ:
अहिलेको लागि, रोजगारीको भविष्य घरमै छ। क्वारेन्टाइन अघि, लगभग 15% अमेरिकीहरू घरबाट काम गर्थे। यो अब मूल्याङ्कन गरिएको छ कि प्रतिशत बढेर 50% भएको छ, जुन सहयोगी प्लेटफर्महरूको लागि राम्रो समाचार हो। माइक्रोसफ्ट टोलीहरू, जसमा प्रति मिनेट औसत 52,083 व्यक्तिहरू सामेल हुन्छन्।
जूम, एक भिडियो कन्फरेन्सिङ इन्टरप्राइज, प्रयोगकर्ताहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि देखेको छ। तिनीहरूको दैनिक एप सत्रहरू फेब्रुअरीमा अलिकति दुई मिलियन भन्दा बढि मार्चमा लगभग 208,333 मिलियनमा पुग्यो, औसत XNUMX व्यक्तिहरू प्रत्येक मिनेटमा भेट्छन्।
ब्यक्तिगत रुपमा सामाजिक सङ्गठन गर्न नसक्ने मानिसहरु भिडियो च्याटको प्रयोग बढ्दै गएका छन् । जनवरी र मार्च बीच, Google Duo प्रयोग 12.4 प्रतिशतले बढ्यो, र लगभग 27,778 मानिसहरू प्रति मिनेट स्काइपमा भेट्छन्।
संक्रमण पछि, WhatsAppफेसबुकको स्वामित्वमा रहेको फेसबुकको प्रयोगमा ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
प्रत्येक बितेको मिनेटको साथ, डाटाको मात्रा द्रुत रूपमा विस्तार हुन्छ; अब, यसले प्रयोगकर्ताहरूले त्यस मिनेटमा पोस्ट गरेका लगभग 140k तस्बिरहरूमा अनुवाद गर्दछ, र त्यो भर्खरै फेसबुक.
फेसबुक र अमेजन जस्ता निजी फर्महरू, यद्यपि, डाटा राख्ने मात्र होइनन्। सरकारहरूले पनि डाटा प्रयोग गर्छन्, सबैभन्दा बोधगम्य उदाहरण सम्पर्क ट्रेसिङ अनुप्रयोग हो, जसले मानिसहरूलाई चेतावनी दिन्छ यदि तिनीहरू अझै पनि COVID-19 भएको कसैको नजिक छन् भने।
यसको मतलब यो हो कि डेटाले अब यसको वृद्धिमा सुस्तताको कुनै संकेत देखाउँदैन, र यस दावीलाई ब्याकअप गर्न तथ्याङ्कहरू छन्। यी तथ्याङ्कहरू कुनै पनि समय चाँडै ढिलो हुने सम्भावना छैन, र तिनीहरू केवल विश्वव्यापी इन्टरनेट जनसंख्या समयको साथ बढ्दै जाँदा वृद्धि हुने भविष्यवाणी गरिएको छ।
त्यहाँ सामाजिककरणको लागि भिडियो च्याट, कुनै पनि प्रकारको वस्तु अर्डर गर्न स्मार्टफोन डेलिभरी सेवाहरू, मनोरञ्जनको लागि भिडियो स्ट्रिमिङ एपहरू, र यस्तै अन्य छन्। नतिजाको रूपमा, डेटा विज्ञापन क्लिकहरू, मिडिया साझेदारीहरू, सामाजिक मिडिया प्रतिक्रियाहरू, लेनदेनहरू, सवारीहरू, स्ट्रिमिङ सामग्री, र थप मार्फत लगातार उत्पन्न हुन्छ।
प्रत्येक मिनेटमा कति डाटा जेनेरेसन हुन्छ?
ध्यान राख्नुहोस् कि डाटा हरेक मिनेट उत्पन्न हुन्छ। प्रति डिजिटल मिनेटमा कति डाटा उत्पन्न हुन्छ भन्ने सबैभन्दा भर्खरको डाटालाई हेरौं। मनोरञ्जन खण्डमा केही संख्याहरूबाट सुरु गर्दै:
पहिलो त्रैमासिकमा, बढ्दो लोकप्रिय अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म मध्ये एक Netflix 15.8 मिलियन नयाँ ग्राहकहरू थपियो, जनवरी देखि मार्च सम्म ट्राफिकमा 16 प्रतिशत वृद्धि। यसले 404,444 घण्टाको भिडियो स्ट्रिमिङ पनि जम्मा गर्छ
तपाईंको मनपर्ने YouTubers लगभग 500-घन्टा भिडियो अपलोड गर्नुहोस्
सबै प्रसिद्ध भिडियो सिर्जना र साझेदारी प्लेटफर्म टिक टक लगभग 2,704 पटक स्थापित हुन्छ
केहि धुनहरु संग यो खण्ड बन्द छ Spotify जसले यसको पुस्तकालयमा अनुमानित २८ ट्र्याकहरू थप्छ
सामाजिक मिडियामा अगाडि बढ्दै, जुन हाम्रो अनलाइन समुदायको सबैभन्दा आधारभूत र लोकप्रिय भाग हो।
इन्स्टाग्राम, विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात भिजुअल साझेदारी नेटवर्क, यसको कम्पनी प्रोफाइल विज्ञापनहरूमा 347,222 हिटहरू सहित, यसको कथाहरूमा मात्र 138,889 प्रयोगकर्ता पोस्टहरू छन्।
twitter लगभग 319 नयाँ सदस्यहरू थप्छ, memes र राजनीतिक बहस संग आफ्नो गति कायम राख्दै।
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू - चाहे सहस्राब्दी, बुमर्स, वा जेन जेड - सबैभन्दा लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा लगभग 150,000 सन्देशहरू र अनुमानित 147,000 फोटोहरू साझेदारी गर्न जारी राख्छन्।
कनेक्टिभिटीको सन्दर्भमा, प्रि-कोविड युगदेखि संख्याहरू नाटकीय रूपमा बढेको छ:
उदीयमान सञ्चार प्लेटफर्म माइक्रोसफ्ट टिम्सले लगभग 52,083 प्रयोगकर्ताहरूलाई जोड्दछ
अनुमानित संख्या लगभग 1,388,889 व्यक्तिहरूले भिडियो र भ्वाइस कलहरू गर्छन्
सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने टेक्स्ट मेसेजिङ प्लेटफर्म व्हाट्सएपमा २ अर्बभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले ४१,६६६,६६७ सन्देशहरू साझेदारी गर्छन्
भिडियो कन्फरेन्सिङ एप्लिकेसन जुमले बैठकहरूमा 208,333 सहभागीहरूलाई होस्ट गर्छ
भाइरल समाचार र सामग्री साझेदारी प्लेटफर्म Reddit ले लगभग 479,452 व्यक्तिहरू सामग्रीसँग संलग्न भएको देख्छ
जबकि रोजगार उन्मुख प्लेटफार्म LinkedIn मा 69,444 कामका लागि आवेदन दिने प्रयोगकर्ताहरू छन्
तर, डेटालाई एक क्षणको लागि अलग राखेर, इन्टरनेटमा हरेक मिनेट खर्च भइरहेको पैसाको बारेमा के हो? उपभोक्ताहरूले इन्टरनेटमा करिब $ 1 मिलियन खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसबाहेक, Venmo प्रयोगकर्ताहरूले $200k भन्दा बढी भुक्तानीहरूमा पठाउँछन्, मोबाइल एपहरूमा $3000 भन्दा बढी खर्च भएको।
अमेजन, प्रमुख अनलाइन मार्केटिङ कर्पोरेशन, प्रति दिन 6,659 ढुवानी पठाउँछ (अमेरिकामा मात्र)। यसैबीच, अनलाइन डेलिभरी र टेकआउट प्लेटफर्म Doordash डिनरहरूले लगभग 555 खानाहरू अर्डर गर्छन्।
हाम्रो समाजको विकास हुँदै जाँदा, व्यवसायहरूले पनि अनुकूलन गर्नुपर्छ, जुन लगभग सधैं डाटाको प्रयोग आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक स्वाइप, क्लिक, लाइक, वा सेयरले धेरै ठूलो डाटाबेसमा योगदान पुर्‍याउँछ, जसले तपाईंको ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पत्ता लगाउन सक्छ। नतिजाको रूपमा, जब यी संख्याहरू सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गरिन्छ, प्राप्त जानकारीले द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको संसारको धेरै राम्रो बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ। COVID-19 को कारणले गर्दा, धेरैजसो फर्महरूले फरक तरिकाले काम गरिरहेका छन्, र तिनीहरूको आफ्नै सञ्चालन र वातावरणको बारेमा वास्तविक-समयको डाटाले उनीहरूलाई बाँच्नको लागि अझ राम्रो निर्णयहरू लिन सक्षम बनाउन सक्छ, र प्रतिक्रियामा पनि समृद्ध हुन सक्छ।
टैग: 2021सक्रिय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूअमेजनफेसबुकgoogle duoइंफोग्राफ़कइन्स्टाग्राम तथ्या .्कइन्टरनेट मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूइन्टरनेट तथ्या .्कइन्टरनेट प्रयोगइन्टरनेट उपयोग तथ्याङ्कमाइक्रोसफ्ट टोलीहरूsenseसामाजिक मिडिया तथ्या .्कद्विपक्षीय र विश्लेषणात्मक अवस्थाडाटा केन्द्रको अवस्थाडाटा कहिल्यै सुत्दैनट्विटर तथ्या .्कभिन्मोभिडियो कलहरूभ्वाइस कलयूट्यूब तथ्या .्कजुम
Shirley Stark हाल InfoCleance मा मार्केटिङ टीम लीडको रूपमा काम गर्दैछ। उनीसँग B2B मार्केटिङमा ह्यान्ड्स-अन अनुभव छ र ब्लगहरू लेख्न, सुझावहरू, b2b लेखहरू पढ्न, व्यापार रणनीतिहरू सिर्जना गर्न र यात्रा गर्न मनपर्छ।
कसरी रिभर्स रसद समाधानहरूले ई-वाणिज्य बजारमा रिटर्न प्रशोधनलाई स्ट्रिमलाइन गर्न सक्छ